कोभिड युनिफाइड अस्पतालका सिइओ डा. गौतम भन्छन्- 'लुजडाउन' गर्न अलि छिटो भयो कि! :: विवेक राई :: Setopati
कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. जागेश्वर गौतमले सरकारले अलिक छिटो 'लुजडाउन' गरेको भन्दै पुनः संक्रमण बढ्न सक्ने बताएका छन्।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै डा. गौतमले केही दिन अझै हेरेर निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउनुपर्नेमा अलिक हतारो भएको बताए।
'अलिक दिन हेरेर विस्तारै लुजडाउन गर्दै जानुपर्थ्यो भन्नेमा हामी थियौं। अहिले पनि त्यही नै छ। मान्छेले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्दैनन् र नगरेपछि फेरि संक्रमण बढ्छ कि भन्ने डर छ,' गौतमले भने, 'त्यसैले लुजडाउन गर्न अलिक छिटो भयो भन्ने लाग्छ।'
उनले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना फितलो हुँदै गएको भन्दै यही अवस्था रहिरहे संक्रमण बढ्ने बताए।
उनले सार्वजनिक यातायात खुलाउने काम पनि चाँडो भएको भन्दै अहिले निश्चित सवारीलाई मात्र छनोट गरी खुलाउनुपर्ने जनाए।
यातायात खुल्नसाथ भिडभाड बढ्ने र संक्रमण पुनः बढ्ने उनको भनाइ छ।
सरकारले असार १५ गतेदेखि २५ सिट क्षमतामाथिका सार्वजनिक यातायातलाई जोर-बिजोरबाट सञ्चालन गर्न दिने भनेको छ। सोही अनुसार अहिले उपत्यकामा जोर-बिजोर प्रणालीमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भइरहेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयलका पूर्वप्रवक्ता समेत रहेका डा. गौतम भन्छन्, 'हामीले लकडाउन खोलेपछि संक्रमण दर बढ्नु हुँदैन। तर बढिरहेको छ।'
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पनि केही दिनयता संक्रमण पुनः बढ्न थालेको देखिन्छ। हिजो (बिहीबार) कुल १० हजार ९५७ जनाको परीक्षण गर्दा २ हजार ७६० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। जबकि असार १० गते १४ हजार ३५१ जनाको परीक्षण गर्दा जम्मा २ हजार ४७६ जनामा संक्रमण देखिएको थियो। तथ्यांक अनुसार गत असार १४ गतेदेखि फेरि लगातार संक्रमण बढेको देखिएको छ।
असार १४ गते २ हजार ४४४, असार १५ गते २ हजार ६३६, असार १६ गते २ हजार ८९२ र असार १७ गते २ हजार ७६० जनामा संक्रमण देखिएको छ। अर्थात् संक्रमण बिस्तारै बढिरहेको छ। तर पछिल्लो एक साता र निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउनुअघिको एक साताको तथ्यांक हेर्दा भने संक्रमण दर स्थिर नै देखिन्छ।
असार १७ गतेदेखि असार ११ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार कुल ७९ हजार ६१० जनाको परीक्षण गर्दा १७ हजार १४४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यो भनेको २१.५७ प्रतिशत संक्रमणदर हो।
यस्तै, निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउनुपूर्व असार ७ गतेदेखि जेठ ३१ सम्मको तथ्यांक अनुसार कुल ८५ हजार ३५९ जनको परीक्षण गर्दा १८ हजार ८८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यो भनेको २१.१९ प्रतिशत संक्रमणदर हो। अर्थात् संक्रमणदर २१ प्रतिशतमा स्थिर रहेको देखिन्छ।
तर पछिल्लो केही दिनयता बढ्दै गएको पोजेटिभ संख्याले संक्रमण बढ्दै गएको देखाउँछ। त्यसैले पनि डा. गौतमले यही अवस्था रहिरहे संक्रमण बढ्ने जनाएका हुन्। यद्यपि संक्रमणदर कति भयो भने लुजडाउन गर्दा हुन्छ भन्नेमा डा. गौतमले पनि भन्न सकेनन्। यद्यपि लुजडाउन गर्दा संक्रमणदर बढ्न नहुने तर अहिले बढिरहेको भन्दै जोखिम बढेको गौतम बताउँछन्।
उनले फेरि संक्रमण बढे त्यसले पहिलेको जस्तै क्षति गर्ने/नगर्ने भन्नेमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र उपत्यका प्रवेशमा कति कडाइ गर्छ भन्ने कुराले तय गर्ने बताए।
'कति क्षति हुन्छ भनेर भन्न त सकिँदैन। त्यो चाहिँ सीमामा हामी कति कडाइ गर्छौं, उपत्यका प्रवेशमा कति कडाइ गर्छौं र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड कति कडाइका साथ पालना गर्छौं भन्ने कुराले तय गर्छ। तर व्यवहार यी सब कुरा कडाइका साथ पालना गरिएको देखिएन,' उनले भने।
त्यसोभए संक्रमण फेरि बढे पुनः लकडाउन गर्ने त? भन्ने प्रश्नमा डा. गौतमले युरोपका देशहरूमा पनि धेरैचोटि लकडाउन गर्ने र बन्द गर्ने गरेको भन्दै प्राण बचाउनलाई त्यो स्वीकार गर्नुपर्ने जनाए।
कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका सिइओ रहेका गौतमले लुजडाउन भएपछि अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ? भन्ने प्रश्नमा 'त्यसका लागि अझै एक-दुई साता लाग्ने' बताए।
'अस्पतालमा अहिले चाप बढेको छैन। तर त्यो हुन अझै एक-दुई साता लाग्छ,' उनले भने।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार १८, २०७८, ०३:३८:००